Dubartiin Lammii Ameerikaa Jalaqaba Ministrii Dhimma Alaa Ta’uun Tajaajilan Du’aan Boqotan
Ministii dhimma alaa ka turan, Madeleine Albright
Dubartii lammii Ameerikaa jalqabaaf ministii dhimma alaa ka turan Madeleine Albright, roobii kaleessaa umurii isaanii waggaa 84tti du’aan boqotan. Imaammata ministrii dhimma alaa Ameerikaa qopheessuu fi yaadannoo hedduuf kaka’umasa ta’e dhiisanii darban.
Madeleine Albright bara 1996 keessa diplomaatii Yunaayitid Isteetis gameettii ta’uuf ennaa prezidaant Bill Clinton-n muudaman, seenaa mootummaa Ameerikaa keessatti dubartii hojii sadarkaa ol aanaaf waamaman ta’anii jiran.
Hojii isaanii waggaa afurii keessatti waraansa Balkaans keessatti geggeessameef deebii Ameerikaan kennite hoogganuu akkasumas kan meeshaa nukileraa qabdu kooriyaa kaabaa fi finxaalessummaa giddu galeessa ba’aa keessatti hammaataa adeeme dura dhaabbataniiru.
Albright roobii kaleessaa dhibee kaanseriin rakkataa erga turanii booda bakka maatiin isaanii jiranitti lubbuun isaanii darbee jira. Kabajamoo ministrittii dhimma alaa jechuu dhaan naannoo addunyaatii yaadannoo isaaniif ergaan ergamaa jira.
Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddera Yunaayitid Isteetis kan ta’an Linda Thomas-Greenfield, Albright hedduu jajjabeessaniiru jedhan.
“Isaan hooggantuu fi beektuu , Ministrii dhimma alaa ta’uun kan hojjetan dubartii jalqabaa turan. Addunyaa ti tokkummaa mootummootaaf ashaaraa hin banne dhiisanii darban. Biyyi keenyaaf tokkummaan mootummootaa sababaa tajaajila isaan kennaniif ciman jedhan.
Jireenyi Albright, kan hundaa’e dararaa namoomaa keessa darbee ti. Praag Czechoslovakia-tti kan dhalatan Allbright bara 1937 erga Naaziin bara 1939 biyyattii weeraree booda maatii isaanii waliin gamasii baqatan. Sana booda akaakayyuu akaakilii isaanii sadii fixiinsa Naaziin dhabuu hubatan.
“Akkawoon koo gara Prague-tti akka nafidan ta’e. namni martinuu borsaa tokko qofa qaba. Baabura imaltootaan gamasii ba’an. Akka isaan natti himanitti yeroo dhumaaf maatii isaanii kan argan yeroo sana Jedhan.
Maatiin Albright baqattoota ta’uun gara Yunaayitd Isteeyis dhufuu dhaan Denver, Colorado keessa qubatan.
Bara bulchiinsa Clinton, jalqaba tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddera Yunaayitid Isteetis sana booda immoo ministrii dhimma alaa ta’uun tajaajilaa turan jechuun Saaleem Solomon gabaasteetti.